Maanta Oktoobar 18 waxaan leenahay dhacdo cusub oo Apple ah: La sii daayay | Waxaan ka imid mac
Mid ka mid ah wararka maalinta ayaa shaki la'aan ah kan dhacdada Apple ee maanta. Maalinta Oktoobar 18 markay tahay 19:00 fiidnimo PST Waxay beddeli kartaa dhammaan koorsooyinka Mac -yada oo leh soo -saareyaasha cusub mid kasta iyo Apple Mac kasta.
Markan waa inaan sheegnaa in xanta iyo daadinta caadiga ah aysan saamayn badan ku yeelan shirkadda Cupertino. Dhacdada maanta waxaad ku arki kartaa waxay soo bandhigayaan laakiin Apple wuu na yaabi karaa dhammaan maadaama aysan jirin wax daadanaya alaabta.
Way fiicantahay in aynaan lahayn xanta iyo daadinta
In badan oo naga mid ah ayaa u roon in la yimaaddo dhacdo oo gebi ahaanba la iska indho tiro waxa ay soo bandhigayaan. Qaybta xiisaha leh ee dhacdadu waxay noqon doontaa in la arko haddii Apple runtii naga yaabin karto wax cusub marka la eego qalabka laftiisa ama gudaha ku jira. Waxaa loo malaynayaa in markan aynaan ku yeelan doonin isbeddelada bilicda ee Mac -yada, laakiin qaybta gudaha waxaan sidoo kale ugu dambeyntii arki karnaa jiilka saddexaad ee AirPods iyo laga yaabee wax kale oo la yaab leh.
Waxaas oo dhan waxaan ku arki doonnaa munaasabadda maanta dhici doonta oo aan ku raaxaysan doonno soydemac.com isla isla waqtigaas oo Tim Cook ka soo muuqdo goobta. Si macquul ah sida aan nidhaahno bilowga bilowga oo aan lahayn wax tafaasiil ah oo gaar ah waqtigan ku saabsan waxa ay soo bandhigayaan Waxay sare u qaadeysaa filashooyin badan, waan arki doonaa haddii ay awoodaan inay naga yaabiyaan saacado yar gudahood.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Maanta Oktoobar 18 waxaan leenahay dhacdo cusub oo Apple ah: La sii daayay
Sawirka MacBook Pro oo leh Notch ayaa ka muuqda shaashadda